နွေဥသြ (အပိုင်း-၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » နွေဥသြ (အပိုင်း-၂)
Posted by Foolish Girl on Aug 9, 2016 in Short Story | 8 comments
“ယောက်ဖမင်းကပါငါ့ကို ဟားတယ်ပေါ့ ဟေ့ရောင်”
“မဟုတ်ပါဘူးကွာ သဘောကျလို့ပါ” ပြောရင်းထွန်းကျော်တစ်ယောက်ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်နေပြန်တော့သည်။
“ယောက်ဖ မင်းကပါငါ့ကိုဟားတယ်ပေါ့ လေဟေ့ကောင်”
“မဟုတ်ပါဘူးကွာ သဘောကျလို့ပါ။” ပြောရင်းထွန်းကျော်တစ်ယောက်ရယ်နေပြန်သည်။
“အခုကတည်းက ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်သေးတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အတွက် သူငယ်ချင်းအရင်းကို ဟားတယ်ပေါ့လေ” ဟုဆိုကာ မင်းနိုင်တစ်ယောက် ထထွက်လာခဲ့သည်။
“ဟေ့ကောင် ယောက်ဖ မင်းကလည်းကွာ မိန်းမကျနေတာပဲ ရယ်စရာပါလို့ရယ်တာပေါ့ကွ မင်းကွာ ယောကျာ်းကြီးတန်မဲ့ စိတ်ကောက်ရတယ်လို့ အဲဒါကြောင့် ဟိုကောင်မလေးတွေ ကပိုင်းလွှတ်လိုက်တာ”
ထွန်းကျော်ပြောနေသည်မှာ ဟုတ်လည်းဟုတ်နေပြန်သဖြင့် မင်းနိုင်တစ်ယောက် မိန်းမဆန်သွားသော အမူအယာကို ရုတ်သိမ်းကာထွန်းကျော်ဘေးတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်သည်။ ထွန်းကျော်လည်း ဆက်ပြီးရယ်မနေတော့ဘဲ တစ်ခြားရောက်တတ်ရာရာများပြောရင်းအချိန်ဖြုန်းနေကြတော့သည်။
“မင်းကွာ မနက်စောစောစီးစီး ကျောင်းလားရတာ ပျင်းစရာကြီးကွာ ဖယ်ရီကဒီအချိန်မရောက်သေးတာသိသားနဲ့ final ရောက်နေပြီ ဒါတောင်မသိဘူးလား ၀ါးးးးးးးးးးးးးးးး” မင်းနိုင်တစ်ယောက်ပြောလည်းပြောရင်းအိမ်ရေးပျက်ရသည်ကို စိတ်ညစ်စွာနှင့်ထွန်းကျော်ကို အပြစ်တင်နေသည်။
“မင်းကလည်းကွာ ဒီမှာ မျက်ဝန်းလေးကိုစောင့်ကြည့်မလို့ပါဆိုမှ”
“အချစ်ရဲ့တန်ခိုးကြီးမားကြောင်းအခုမှသိတော့တယ်ဟေ့ မင်းကတော့အချစ်တန်ခိုးကြောင့်အားရှိနိုင်ပေမယ့် ငါတော့ အရမ်းအိပ်ချင်သေးတယ်ကွာ…..၀ါးးးးးး”
“ဟာ မင်းနိုင် ဟိုမှာ ”
ဖယ်ရီသည် ထွန်းကျော်တို့ ရပ်နေသောနေရာ ခပ်လွန်လွန်တွင်ရပ်သည်။ ထွန်းကျော်ကားပေါ်မှဆင်းလာသမျှကို မျက်တောင်မခတ်ပဲ ကြည့်နေသည်ကို မင်းနိုင်တစ်ယောက်ကြည့်မရတော့ချေ။
ဟုတ်ပါသည် ထွန်းကျော်အတွက် ချစ်စနိုးနှင့် မျက်ဝန်းလေးဟုခေါ်နိုင်သော်လည်း မင်းနိုင်အဖို့ကတော့ သူရဲသုံးကောင်ပင်ဖြစ်သည်။
“မင်းကလည်းကွာ ကန်တင်းသွားမှာပေါ့ကွ ဗိုက်ဖြည့်မယ်လေကွာ ဟောဟိုမှာတွေ့လား သူတို့ကန်တင်းဘက်သွားကြပြီ”
သူရဲမလေးများနှင့် နံနက်စာ ဖြည့်ရမည့်အရေးကို မင်းနိုင်တစ်ယောက်ပခုံးတွန့်သွားသည်။
ကန်တင်းရောက်ရောက်ခြင်း ကောင်မလေးများ၏ ဆူဆူညံညံ အသံကို ကြားရသည်။ မင်းနိုင်တစ်ယောက်နောကျေနေသည့်သဘောဖြင့်
မင်းနိုင်ပြောသလိုပင် သူတို့ရှေ့တွင် ယမ်ယမ် သုံးပွဲ။ ထွန်းကျော်လည်းကောင်မလေးတို့ဝိုင်းနှင့်ကပ်ရပ်ဝိုင်းတွင် ထိုင်လိုက်သည်။ ထိုင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက် တစ်ဖက်ဝိုင်းမှ ရွဲ့စောင်းသံကိုကြားရသည်။
“နှင်းရေ ငါလေစောစောစီးစီး ရင်တွေပူလိုက်တာကွယ်”
“ငါကတော့သိပ်မပူသလိုပဲ ငါ့မှာ မိုးရယ် ရွက်သစ်ရယ်ရှိတယ်လေ”
“ဟုတ်တယ်ရွက်သစ်ရဲ့ နှင်းပြောသလိုပဲ ငါတို့က နွေမိုးဆောင်းတွေဘဲဟာ သုံးယောက်လုံးရှိမှတော့ ဒုက္ခတွေက ဟိုးအဝေးမှာ ဟားဟား”
မိုးစက်ဆိုသူက သူ့စကားကို သူသဘောကျနှစ်ခြိုက်စွာ ရယ်မောနေလေသည်။ အရယ်သန်သောကောင်မလေးသုံးယောက်ကို ထွန်းကျော်စိတ်ထဲတွင် အရယ်နိုင်ဆုံးဆုပေးမိသည်။ စိတ်ထဲတွင်သာမက အပြင်မှာပါ
“ရယ်သောသူ အသက်ရှည်၏ တဲ့ မရယ်နိုင်တဲ့ သူတွေကတော့ ငါတို့ကို မနာလိုဖြစ်နေကြတယ်သိလား”
“ဟုတ်ပ မိုးစက်ရာ ငါတို့ first year ထဲက စပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ဖြတ်သန်းလာတာ ငါတို့စာမေးပွဲတွေလဲပျော်ပျော်ဖြေလာကြတာ ဘာအခက်အခဲမှမရှိခဲ့ဘူး။ အရင်ကျောင်းမှာဆို ငါတို့ကိုခင်တဲ့သူပေါမှပေါ ဒီမှာကပူကပူနဲ့ တောင်ကြီးမှာ တက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုလွမ်းလိုက်တာ”
“နှင်းကတော့လေ နှင်းတို့ရယ်တာကို အပြစ်တင်တဲ့သူရှိရင် သူ့ရှေ့မှာ ပိုရယ်ချင်တယ်သိလား ခုတောင်ဘာမှမဟုတ်ဘဲ ရယ်ချင်လာပြီ” ဟုဆိုကာ နှင်းဟူသောမျက်ဝန်းလေး အားပါးတရ ရယ်တော့သည်။ မျက်ဝန်းလေးကို အဖော်မမဲ့စေချင်၍လားမသိ သူမ၏သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကပါ လိုက်၍ ရယ်ကြလေသည်။ သြ ဒါလည်းရူးခြင်းတစ်မျို့ပါလားကွယ် ……………………………..
ရှလွှတ် . . . မှာထားတဲ့ ယမ်ယမ်လေးတောင် မစားရသေးပဲ အပိုင်း ၂ ကပြီးသွားရတယ်လို့ကွာ . . .
ကျေးဇူးပါ အားပေးတဲ့သူအားပေးရကျိုးမနပ်မှာ စိတ်ပူမိတယ်
.တော်တော် ရေးနိုင်တဲ့ အန်တီကြီး
.ရေးသာရေးဗျို့။ ရေးအားကောင်းသူတွေ ရေးသမျှ ဖတ်ဖို့
ဖတ်အားကောင်းတဲ့သူ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ် ဖြစ်ပါကြောင်း
ဒီလို တက္ကသိုလ်များကျတော့လည်း ပျော်စရာကောင်းနေရော
ဟုတ်ပ ဒီဇာတ်လမ်းထဲက တစ်ချို့အဖြစ်အပျက်တွေကတကယ်ကိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ